သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက် ပေးပို့ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို Messenger မှာ မြန်မြန် ဘယ်လို ရှာမလဲ ? – DigitalTimes.com.mm
သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက် ပေးပို့ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို Messenger မှာ မြန်မြန် ဘယ်လို ရှာမလဲ ?
Messenger မှာ သင့် သူငယ်ချင်းများနဲ့ မျှဝေထားတဲ့ ဓါတ်ပုံများကို ရှာဖွေ သိမ်းဆည်းရတာ မလွယ်ကူပါဘူး။ Chat Window တစ်လျှောက် အပေါ်ကို Scroll ပြုလုပ်ပြီး စာသားများကြားမှာ ရောနေတဲ့ ဓါတ်ပုံများကို လိုက်ရှာပြီး သိမ်းဆည်းရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဖြစ်စဉ်ကို လွယ်ကူစေဖို့ Facebook က Messenger မှာ သူငယ်ချင်းများကြားမှာ မျှဝေထားတဲ့ ဓါတ်ပုံများကို တစ်နေရာထဲမှာ စုစည်းပေးထားပါတယ်။
Messenger ကို ဖွင့်ပါ။ သူ့ရဲ့ Home Screen မှာ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကို ရွေးချယ်ပေးပါ။
နောက်အဆင့်မှာ ညာဘက်အပေါ်ထောင့်မှ စက်ဝိုင်းပုံ ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
နောက်ပေါ်လာတဲ့ စကရင်မှာ အောက်ဘက်ကို ဆင်းပါ။ Shared Content အောက်မှာတော့ သင်တို့ ၂ ယောက် မျှဝေထားတဲ့ ဓါတ်ပုံများအားလုံးကို တစ်စုတစ်စည်းထဲ ပြသပေးထားပါတယ်။ သိမ်းဆည်းချင်တဲ့ ဓါတ်ပုံကို တစ်ချက်နှိပ်ပါ။ ညာဘက်အောက်ခြေမှ ဒေါင်လိုက် အစက်သုံးစက်ကို နှိပ်ပြီး Save Image ကို နှိပ်ရင် အဲဒီ ဓါတ်ပုံကို သင့်ဖုန်းမှာ သိမ်းပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် ပေးပို့တဲ့ ဓါတ်ပုံကို သင့်ဖုန်းမှာ အလိုအလျှောက် သိမ်းဆည်းနည်း
သင့် သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က Messenger က သင့်ထံ ပေးပို့တဲ့ ဓါတ်ပုံများကို သင့်ဖုန်းမှာ အလိုအလျှောက် သိမ်းဆည်းချင်ရင် Home Screen ရဲ့ ညာဘက်အပေါ်ထောင့်မှ လူပုံ ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ Photos & Media ထဲသွားပါ။
Save Photo မှ Slider ကို ညာဘက်ရောင်အောင် တစ်ချက်နှိပ်ပြီး On ပေးပါ။ ဒါဆိုရင် သင့် သူငယ်ချင်းပေးပို့တဲ့ ဓါတ်ပုံများကို သင့်ဖုန်းမှာ အလိုအလျှောက် သိမ်းဆည်းပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Save on Capture မှာ On ပေးရင်တော့ Messenger App ကနေ ရိုက်ကူးတဲ့ ဓါတ်ပုံများကို သင့်ဖုန်းမှာ အလိုအလျှောက် သိမ်းဆည်းပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Samsung မူပိုင်ခွင့်မှာ တွေ့မြင်ရတဲ့ အပြင်ချိုး Foldable ဖုန်းဒီဇိုင်း
Realme3ရဲ့ ပထမဆုံး Flash Sale မှာ အလုံးရေ ၂၁၀ ၀၀၀ ရောင်းချရ